रि–एजेन्ट केमिकल सकिँदा कोरोना परीक्षण रोकियो | चितवन पोष्ट दैनिक
रि–एजेन्ट केमिकल सकिँदा कोरोना परीक्षण रोकियो
भरतपुर । रि–एजेन्ट (केमिकल) अभाव हुँदा भरतपुर कोभिड ल्याबमा कोरोना परीक्षण रोकिएको छ । रि–एजेन्ट मगाएको भए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । रि–एजेन्ट अभाव भएपछि सोमबारदेखि संकलन भएका नमुनाहरु राष्ट्रिय प्रयोगशाला पठाउने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ । पिसिआर परीक्षणमा रि–एजेन्ट केमिकलको भूमिका मुख्य रहन्छ ।
दस दिनअघिदेखि विभिन्न अस्पतालहरुबाट मागेर टारिएकोमा सोमबार सकिएको ल्याब प्रमुख डा. नितु अधिकारीले बताइन् । १५ सयजति संख्यामा मागेर काम चलाइएको उनले बताइन् । ‘आइतबारसम्म संकलन भएको नमुनाको सोमबार परीक्षण गरेर सकियो, सोमबार संकलन भएको नमुनाको परीक्षण हुन रि–एजेन्टको अभावले सम्भव भएको छैन’, डा. अधिकारीले भनिन् । रि–एजेन्ट अभावको विषयमा अस्पताल व्यवस्थापनलाई जानकारी गराइसकिएको उनले बताइन् । सोमबारमात्रै २ सय बढी नमुना संकलन भएको उनले जानकारी दिइन् । दुई–चार दिन नमुनामात्रै थपिँदै जाने तर परीक्षण नहुने हुँदा पुनः ढिला गरी रिपोर्ट सार्वजनिक हुने र त्यसको असर नमुना दिएकाहरुमा पर्ने देखिन्छ ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले रि–एजेन्ट माग गरिएको भए पनि हालसम्म नआइपुगेको बताए । ‘आपूर्ति महाशाखाबाट आउने भएकाले हामी पनि कुरेरै बसिरहेका छौँ’, सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘मंगलबारसम्म आइपुगेन भने बाध्य भएर नमुनाहरु राष्ट्रिय प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’
भरतपुर अस्पतालले हालसम्म सरसापट गरेर, मागेरै भए पनि काम चलाएको भन्दै उनले अब पनि नआए ल्याब सञ्चालनमा समस्या हुन सक्ने बताए । रि–एजेन्टको आवश्यकतासम्बन्धी पटकपटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको तर समस्याको समाधान हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । रि–एजेन्ट अभाव हुनेजस्तो देखिनेबित्तिकै पत्र तथा मौखिकरुपमा समेत जानकारी भएको उनले बताए ।
कम हुँदै चाप
भरतपुर कोभिड ल्याबमा कोरोना परीक्षणको नमुना चाप कम हुँदै गएको छ । चितवन मेडिकल कलेज र क्यान्सर अस्पतालमा समेत यसको परीक्षण थालिएपछि नमुना चाप घटेको ल्याब प्रमुख डा. नितु अधिकारीले जानकारी दिइन् । दुवै ल्याब सञ्चालनअघि दैनिक ८ सयजति नमुना संकलन हुने गरेकोमा हाल जम्मा ३ सयको हाराहारीमा मात्रै नमुना आउने गरेको उनको भनाइ छ । प्राप्त नमुनालाई २४ घन्टाभित्र परीक्षण गरिदिने गरिएको उनले बताइन् ।